Vidio: Emailvision Technology na Uto | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ ma na-apụ Emailvision n'ime afọ abụọ gara aga. Otu n’ime isi ike ha nwere bụ ihu igwe mmadụ na-asụ ọtụtụ asụsụ na nkwado onwe onye na-asụ ọtụtụ asụsụ. Tinye nchikota ndi mmadu na ihe omuma ha na abia, ya abughi ihe ijuanya na Emailvision na enwe uto di egwu di otua:
Nkezi 100 nde ozi kwa ụbọchị.
N'ime Ozi ijeri 5 kwa ọnwa.
Na-egbu egbu 350,000 mkpọsa kwa ọnwa.
N'ime Ndị ọrụ na-arụ ọrụ 8,500.
97.5% zuru ụwa ọnụ ịnapụta (nnukwu na ISP International)
A dị ịrịba ama 100% oge na enweghị laten!